Gustavo Fring: akaipa, kana kuti shasha pane akatevedzana "Breaking Bad"
Akakurumbira yepaTV "Breaking Bad" akada nemamiriyoni vanoiona uye aidiwa nevatsoropodzi. Five azere mwaka rangano akaramba muchizvidya uye kunzwa. Basa racho paakavapa 6 nominations, "Emmy." Chimwe chikuru villains pane akatevedzana ari Gustavo Fring - mukuru zvinodhaka. musangano mukuru hunhu vangasimudzira achinja njodzi zvose.
TV kufirimu "Breaking Bad" (mwaka 1) anotiudza zvakazoitika zvavo kemisitiri mudzidzisi - Walter White. Rimwe zuva anowana kuti chirwere chisingarapiki. Ipapo murume akasarudza kuita kugadzirwa chakaita zvokugadzirwa zvinodhaka - methamphetamine. Vavariro yake - kupa mhuri pamwe zvinoreva, iyo yaizova zvakakwana, uye pashure pokufa kwake.
Gustavo Fring aonekwa anoratidza Mumwaka 2. It nezvevanakomana White zvinodhaka kutenga. Mumwe nechepakati kutaurwa Gus anowana 3 mwaka.
Panguva iyoyowo, Walter anodzidza kuti hosha yaserera, uye achararama. Zvino zvose pamwe mushonga rava zvachose rokurwa gamba. Nokuda kwaizvozvi, anorasikirwa wake.
Gus anoita kutyisidzirwa Walt wake nomumwe basa voga. White havazvifariri uye akasarudza kutiza nemhuri yake. Zvisinei, ake urongwa vakaenda neparutivi. Ipapo anosarudza kubvisa muvengi ngozi uye anouraya Fringe pakupera mwaka.
Zvose zvinozivikanwa pamusoro Fringe
Fring vakatama panguva Pinochet hurumende kubva Chile kuMexico. Zvikanzwikwa runyerekupe kuti akanga ari yomukati pedenderedzwa mudzvanyiriri, asi haina kuzivikanwa chaizvo zvakanga Gustavo Fring muChile.
Pamwe chete neshamwari Maximin vakazarura maresitorendi samambure "Brothers huku." Pasi pabutiro mumwe wavo, uye kushanda mishonga, ichibereka amphetamine.
The chete storyline, apo unogona kuona chero manzwiro Hus - iri kwayo hwepedyo Max. Mushure Mexican cartel anomuuraya, Fring chinotarisa zvose pfungwa dzake kutsiva Hector Salamanca.
Gustavo akangwara, pakuverenga uye ine utsinye. Iye tisingazvioni anonyengera vanhu kuti ivo pachavo vabatsirwe, kuti hazvibviri kufunga kuti izvi zvinoitwa chete nevavariro dzoudyire. Fring - strategist uyo anoronga vavengi vavo unravels pachine. ruzivo rwake wepfungwa dzevanhu pane kamwe akabatsira kutiza nayo.
Kunyange panguva yorufu rwake, Fring havazotadzi kuzvidzora. For nechando wakadzikama nhema dutu nokuchiva uye chete chido - kutsiva. Ndokusaka Gus - kupfuura ngozi uye kutyisa akaipa akatevedzana.
Ndiani kuridza basa akaipa
Zvakakwana akabata basa Gustavo Fringe Actor Dzhankarlo Espozito. Anoziva kuti vaoni kubva yepaTV yakadai "Miami Vice," "Mapfupa," "Vata kwandiri" uye vamwe vakawanda. Esposito akaedza rwake ari kutungamirira, akaberekwa zvimwe zvirongwa.
Basa Anti-gamba yaiva mweya mutambi. Iye anotarisira kuti vateereri ucharangarira Gus, "uye zvichava mukurota." Giancarlo zvaida unyanzvi kuti recreate mufananidzo Guus akadai mukuru waro aida. Hunyambiri hunhu mupfungwa uye uchenjeri kuri muna mutambi pachake uye muupenyu hwezuva nezuva. Ndicho chikonzero akakwanisa saka zvakarurama kuratidza duku mashoko yezvakaita Fringe. Nokuti chinangwa ichi zvakanga zvakakodzera kuti ruzivo, kuburikidza izvo utsinye uye kurwadziwa nokurasikirwa raiva Gustavo.
Rufu gamba iri akatevedzana aiva chisingadzivisiki. Zvino mukuru, pamwe chete mutambi vakasarudza kuzviita pakuguma mwaka. Pakazosvika nguva Gustavo akanga atova chinhu inozivikanwa, uye ayo pakurwisana cartels, pakupedzisira ndokuguma zvinosuruvarisa.
Gustavo Fring hunhu anoita ari yepaTV basa antipode yacho protagonist. Zvaiva pamwe Gusa Uolter anoziva zvakawanda zvinokosha muupenyu.
In sezvinhu rufu Gustavo kuita-up Artists vaifanira kushanda nesimba. Nyanzvi kubva "famba vakafa" anenge zuva vaishanda kwezvisikwa "rufu chifukidzo". basa ravo kunoongwa nokuda vatsoropodzi, achidana mamiriro "muromo kupfeka mukamuri unyanzvi".
Pakutanga antihero 3 uye 4 mwaka haina kumbofunga Gustavo uye Hector Salamanca, uyo iri wepaterevhizheni "Breaking Bad" muna 1 mwaka.
Akatevedzana kwave kuchizivikanwa kwete chete vaoni, asiwo vakawira muna 2014 mu "Guinness Book of Records" sendarama yakakurumbira TV firimu iri kumwedzi.
Pane ruzivo kuti Gustavo Fring vachaonekwa 3 kuruka-kure mwaka "nani Call Sauro". Ndicho nyaya zvakaitika makore mashoma pamberi nyaya Walter White.
Methamphetamine zvatinoona yakatsiva zvihwitsi, akasvibiswa mutema. Mukugadzira zvinhu vatambi "akadzidzisa" chaiye nenyanzvi - purofesa wekemisitiri uye mutumwa Anti-zvinodhaka.
Firimu Soviet "The Republic SHKID": vatambi uye mabasa
Killian Merfi (Cillian Murphy): Filmography uye upenyu pachavo pamusoro mutambi
Characters "Musashamisika": kupfuura rakakurumbira uye chinonyanya kuchiva
Mumwe wevana kufarira vatambi - Pokemon. Dawn - Coordinator zvisikwa
Indigo vana - vanoita?
Most varwi zvakanaka kubva 90s kusvikira nhasi
How kuchengeta mazino enyu utano: chevarwere mishonga, mazano anobatsira uye dzinobudirira
Irma Vitovskaya: Biography uye mabasa
Metro "China Town": kusvetukira mukati kupinda munhoroondo
Day lenses Acuvue TruEye: tsananguro, features, maonero, User ratings uye wongororo
The sangano "5000 rubles": nhoroondo nechitarisiko uye kudzivirirwa. Sei kuziva yokunyepera bhiri, "5000 rubles"
Knitting ngowani spokes vana
Kuisa epurasitiki mahwindo uye avo kuenderera
Tartlets uri mutambo patafura. The yakanakisisa Recipes
Bun pamwe apricots akaoma: kuti tikundikane ne pikicha
Park "Tsarina". Park "Tsarina" kero, sei
Arachnoid cysts uropi - zviratidzo
Laptop Asus K52D: tsanangudzo, miedzo uye kuongororwa.